Mercedes-Benz sidoo kale waxay Apple kala hadlaysaa Apple Car | Waxaan ka socdaa mac
Mercedes-Benz sidoo kale waxay Apple kala hadlaysaa Apple
Sidii aan si fiican uga dignay maalmo ka hor, Apple kaliya lama hadlin Hyundai Motors soo saarista Apple Car iyo hadda warbixin cusub oo soo ifaysa, mid kale oo ka mid ah noocyada gawaarida waaweyn ayaa sidoo kale ku lug leh tartankan. Mercedes-Benz
Dhexe iPhone hacks la wadaag warkan ku saabsan sheekaysiga u dhexeeya shirkadda Cupertino iyo shirkadda Mercedes-Benz soosaarida gawaarida korontada ee Apple-ka oo in badan la sugayay laguna xanto, Apple Car.
Xaqiiqdii saacadaha soo socda shirkado badan oo gawaari ah ayaa la soo bixi doona kuwaas oo Apple ay ku bilaabi laheyd wadahadalo ku saabsan soo saarida gaarigaan, laakiin tani waxay noqon doontaa hawl dheer oo caajis ah sidaa darteed waa inaad dulqaad yeelataa.
Xogta ugu dambeysa ee aan ka haynay arrintan waxay ahayd warbixin cusub oo Kuuriya ah taas oo u muuqatay in Apple horay u xaqiijisay iskaashiga ay la leedahay Hyundai si sax ah u saxiix bishii Maarso 2021. Iyadoo qayb ka ah heshiiska la saxiixay, Hyundai iyo Apple waxay maalgelin lahaayeen dhammaan ilaha lagama maarmaanka u ah abuuritaanka warshad cusub oo ku taal Mareykanka inay awood u yeelan karto inay soo saarto 100.000 oo baabuurta Apple Car ah sannadka 2024-ka.
Hadda warbixintan cusub waxaa loo arkaa in aysan jirin wax la saxiixay inkasta oo xaqiiqda ah in wax walba ay isku jiho u jeedaan, ay soo bandhigaan wax ka duwan noocyada kale ee aan hadda ku haysano suuqa oo, iyo wixii ka sarreeya, xoogga saaraya batteriga baabuur cusub si loo kordhiyo is-maamul isku mid ah. Tani waa wax ay Apple laftiisu horeyba u sheegatay inay gacanta ku hayso toddobaadyo ka hor, tiknoolajiyad batari oo gebi ahaanba cusub oo hagaagsan. Waan arki doonaa sida maaddada ay u socoto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Mercedes-Benz sidoo kale waxay Apple kala hadlaysaa Apple
Maalmaha dhibaatooyinka Bluetooth ee Mac-yada leh M1s waa la tirin lahaa